Meizu 17 ga-abata na ihuenyo omenala site na Samsung | Gam akporosis
Anyị ka na-eche maka Meizu 17, Onye na-esote arụmọrụ dị elu nke onye na-emepụta China nke ga-abata dị ka ọkọlọtọ ọhụrụ ya na-abịa na May 8, ụbọchị mmalite nke ngwaọrụ ahụ, nke anyị gosipụtara izu ole na ole gara aga.
Anyị ekpugherela ọtụtụ nkọwa gbasara njirimara na njirimara teknụzụ nke ekwentị a n'ime ọnwa abụọ gara aga, yabụ anyị agaghị enweta nnukwu ihe ijuanya maka ihe niile ụlọ ọrụ ahụ ga-ekpughere anyị na mmemme mmemme ahụ. Agbanyeghị, anyị na-aga n'ihu ịnata ozi ọma banyere ya, nke ikpeazụ metụtara na ekwentị.
Samsung ga-abụ onye nrụpụta Meizu 17 ihuenyo
Samsung bụ otu n'ime ndị na-emepụta smartphones - na ngwaọrụ kọmputa ndị ọzọ - n'ụwa. Otu n'ime ngalaba nke kachasị pụta na ya bụ na ihu igwe, ma Meizu a maara nke ọma. Companylọ ọrụ South Korea na-enye otu n'ime ogwe kachasị mma maka smartphones taa (na ruo mgbe ebighị ebi).
Meizu 17 kwere nkwa ịbịa jiri nke kacha mma. Ọ bụ ya mere ọ ga - eji ihu igwe Samsung eme ihe ka ịghara imechu ihu ntakịrị. Nke a ga-abụ nke teknụzụ Super AMOLED, 90 Hz ma egosila ma kwupụta ya na ọkwa ọkwa ya, nke bụ nke anyị kpọgidere.
Meizu 17 ọkwa ọkwa
Ihe nkwalite na-ewere ohere iji gosi oghere dị na Meizu 17 na bezels ole na ole dị n'ihu ma na-enye ahụmịhe ihuenyo enweghị ngwụcha.
Cheta na ngwaọrụ a ga - enweta chipset nke Qualcomm's Snapdragon 865, chipset dị elu nke edobere naanị maka ọkọlọtọ kachasị ike nke oge a. Ọ ga-abịa na nchekwa UFS 3.1, 64MP quad n'azụ ese foto, okwu igwe okwu, 30W nkwado ngwa ngwa, na Wi-Fi 6.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Meizu 17 ga-abata na ihuenyo Samsung Super AMOLED
Google Stadia dakọtara na OnePlus 8 na OnePlus 8 Pro